Amazon Inobvumirana Kuchenesa 'Zvinhu Zvisingazivikanwe' kana Netflix ichibvisa 'Mashura Akanaka'
musha Horror Varaidzo Nhau Amazon Inobvumirana Kuchenesa 'Zvinhu Zvisingazivikanwe' kana Netflix ichibvisa 'Mashura Akanaka'
yakanyorwa na Waylon Jordan June 23, 2019
Saka, mazuva mashoma apfuura, takataura kuti boka rechitendero rinochengetedza rakaunganidza masiginecha zviuru makumi maviri pachikumbiro inodaidzira Netflix kukanzura Zvakanaka Omens. Ivo vaitaridza kunge vakapotsa chokwadi chekuti showa yainyatso kugadzirwa neAmazon Studios.
Chikumbiro chakataura kuti chiratidziro chakapa mhedziso yakanaka kuSatanism uyezve ichitsamwisa nekuti Mwari akataurwa nemukadzi ari muchiratidziro.
Kune avo vari kunze kwechirevo, Zvakanaka Omens ingano inopopota, yakanyorwa naNeil Gaiman naTerry Pratchett senganonyorwa, nezveAmagedhoni izere nemudhudhudhu vakatasva mabhiza eapocalypse, anove-anti-kuberekwa anopesana naKristu, uye kuraira kwemasisita aSatani.
Ikoko nhevedzano yakavakirwa pane nyeredzi nyeredzi Michael Sheen naDavid Tennant sengirozi nedhimoni vauya kuzoda Nyika uye vafunga kumisa apocalypse iri kuuya chero zvodii.
Netflix UK neIreland vakapindura nevimbiso yakapusa yepasi rose yekusaburitsa zvimwe zvikamu zvechiratidziro nekukasira kuburikidza neakaunti yavo yeTwitter.
ok tinovimbisa kusaita zvimwe https://t.co/TRPux36kcX
- Netflix UK neIreland (@NetflixUK) June 20, 2019
Sezvingatarisirwa, yakanga isiri nguva refu zvisati zvaitika Amazon yakapindurawo neyavo Tweet.
Hey @netflix, isu tinodzima Stranger Zvinhu kana iwe ukabvisa Zvakanaka Mashura. ? https://t.co/EJPmi9rL7g
- Amazon Prime Vhidhiyo US (@PrimeVideo) June 20, 2019
Zvinotaridza kuti ese masevhisi aive neminwe yavo akayambuka pavakaita zvipikirwa zvavo, zvakadaro. mweni Zvinhu ichiri yakagadzirirwa yaChikunguru 4, 2019 kutanga paNetflix, uye sekuinzwisisa kwatinoita, Zvakanaka Omens yainyatso kuitirwa mwaka mumwe chete, kunyangwe paine manzwi ekuti Gaiman nevashandi vanogona kunge vaine chimwe chinhu chakasimudza maoko avo.
Chikumbiro chakanyangarika online mushure mekunge boka raona kukanganisa kwavo, asi kukuvara kwakatoitwa.
Hunhu hwenyaya pano, chokwadika, ndeyekuita kushingairira kwako usati wagadzira yako inotevera online chikumbiro.
AmazonZvakanaka OmensNeil GaimanNetflixTerry PratchettTwitterWaylon Jordan
Heino Chikamu cheMamwe Maperero Eiyo 'Pet Sematary' Remake
Jeffrey Combs, Kid Cudi, uye Big Boi Joinha Shudder's Creepshow!